မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ကျေနပ်အားရကြရဲ့လား ?? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ကျေနပ်အားရကြရဲ့လား ??
မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ကျေနပ်အားရကြရဲ့လား ??
Posted by ဂျစ်စူ on Nov 3, 2010 in 2010/2012/2015 Election, Myanma News, News, Politics, Issues |0comments
2010/2012/2015 Election election 2010 Myanmar: A Pre-Election Primer
နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်သို့ မကြာမီ ရောက်တော့မည်။ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပါတီများ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး က မကြာမီကုန်ဆုံးတော့မည်။ ပါတီများ၏ အသက်က များသော အားဖြင့် လသားအရွယ်၊ သွေးနု သားနု၊ စည်းရုံးရေးကာလက သိပ် တော့မရှိလှ။ စည်းရုံးရေးသည် ရွေး ကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးနှင့် ဆက် စပ်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့် မဲဆွယ် စည်းရုံးရေးကျေနပ်အားရမှုရှိ မရှိ ကျွန်တော်တို့ မေးမြန်းခဲ့မှုအပေါ် ပြန်လည်တင်ပြလိုက်ပါသည်။
စည်းရုံးရေးအတွက် အားရမှု ရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အရင်က ပြည်သူလူထုမှာ အ ကြောက်တရားတွေရှိနေတယ်။ နိုင်ငံ ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာရွက် စာတမ်း တွေ့ရင် ကြောက်နေကြတာ။ အခုတော့ ပါတီတွေကနေ ကား တွေနဲ့ နေရာတကာတွေ့နေတာ တော့ သူတို့ဒါတွေလုပ်နေကျပြီ လားပေါ့။ စိတ်ပါဝင်စားမေးတယ်။ ဆွေးနွေးတယ်။ ပြည်သူမှာ နိုင်ငံ ရေးအသိတွေရှိဖို့လုပ်နေတယ်ဆို တာ သဘောပေါက်လာကြပြီ။ ဒါက အောင်မြင်မှုပဲလေ။
နောက် အောင်နိုင်ရေးစည်းရုံး မှုကတော့ အချိန်အကန့်အသတ် တွေ၊ ငွေကြေးအခက်အခဲတွေနဲ့ ဆိုတော့ အတိုင်းအတာတစ်ခုပဲရှိ တာပေါ့။ အခုပဲ ဘယ်နေ့နောက်ဆုံး ဆိုပြီး သတ်မှတ်လိုက်တော့ ကိုယ် စားလှယ်လောင်းတွေအားလုံး ကိုယ့် နေရာမှာ အဆင်ပြေသလို လုပ်နေ ရတာပေါ့။ တချို့ဆို ပါတီဗဟိုကို တောင်အကြောင်းမကြားနိုင်ဘူး။ သူတို့ကား ရတဲ့ရက်၊ ရှိတဲ့ငွေကြေး လေးနဲ့ လုပ်နေရတာ။ အဲဒီမှာ အ ခက်အခဲရှိပေမယ့် ပြည်သူကို နိုင်ငံ ရေးအသိပေးနိုင်မှုမှာ အားရမှုရှိပါ တယ်။
မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမှာ ရာနှုန်း အားဖြင့် ပြောရရင် ၇ဝ ရာခိုင်နှုန်း လောက် ကျေနပ်အားရမှုရှိပါတယ်။ အကြိမ် ၃ဝ လောက် ကွင်းဆင်း ပြီးခဲ့ပြီ။ ပွဲကြီးဆိုရင် ၅ ပွဲလောက် ပါတယ်။ လူဦးရေ ၇ဝဝ-၈ဝဝ လောက် တက်ရောက်ခဲ့တယ်။ ပြည်သူလူထုရဲ့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြ စိတ်တွေ မပျောက်တာကြောင့် ကျွန်တော့်ဘက်က အားစိုက်ပြီး ရှင်းပြရပြီး မေးမြန်းဆွေးနွေးတာတွေ ကို အများကြီးလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ လက်ရှိ လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပါတီရယ်၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီနဲ့ ကျွန် တော်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ တစ်သီး ပုဂ္ဂလပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်လောင်း)
အားရကျေနပ်မှုရယ်လို့တော့ မရှိသေးပါဘူး။ အကောင်းဆုံးဖြစ် အောင်တော့ စည်းရုံးရေးလုပ်နေပါ တယ်။ ပြည်သူလူထုရဲ့ နွေးထွေး တဲ့ ကြိုဆိုမှုကိုလည်း ရရှိပါတယ်။ တစ်သီးပုဂ္ဂလဆိုတဲ့အတိုင်း တစ် ယောက်တည်းလုပ်ရတာကြောင့် အားသာချက်၊ အားနည်းချက်ကို စဉ်းစားဖို့ အချိန်မပေးနိုင်သလောက် ကို လူထုနဲ့ ထိတွေ့ဖို့ ကြိုးစားနေ ရတာပါ။
ဦးထွန်းရွှေ (နာယက)ဝံသာနုNLD ပါတီ
မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနဲ့ ပတ် သက်ပြီး ဒီနေ့ထိ လုပ်ခဲ့တဲ့အပေါ် မှာ ကျေနပ်မှုရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည့် စုံလုံလောက်မှုမရှိဘူး။ မရှိတဲ့အ တွက် အဘတို့ အများဆုံးအားကိုး တာက မီဒီယာပဲ။ အဘတို့ရဲ့ ရပ် တည်ချက်ကို တစ်လအတွင်းမှာ ပြောဖို့ မပြည့်စုံဘူး။ အဲဒါကြောင့် မီဒီယာပေါ်ပဲ တက်ပြောနေရတာ။ လွတ်လပ် တရားမျှတတဲ့ ရွေး ကောက်ပွဲ ဖြစ်ဖို့က မီဒီယာက အဓိက ပဲ။
မဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့နေရာမှာ ကျေနပ်မှုကတော့ ပြည်သူလူထုရဲ့ တုံ့ပြန်မှုပဲ။ ဒီနေ့အထိ ဖော်ဆောင် လိုက်တဲ့စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှု၊ အဲဒီအ တွက် ကျေနပ်တယ်။ မကျေနပ်ပ တာကတော့ အောက်ခြေပိုင်းမှာ နားလည်မှုလွဲနေတာလေးတွေရှိ တယ်။ ဒါကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ လုပ် ရဦးမယ်။ နောက်တစ်ချက်က ဒီရွေး ကောက်ပွဲမှာ ဘယ်သူ့ကို ဦးတည် တိုက်ရမယ်လို့ သဘောမထားဘူး။ အားလုံးဟာ ယှဉ်ဘက်ပဲသဘော ထားတယ်။ တန်းတူရည်တူ ယှဉ် ချင်တယ်။
မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကတော့ ဒီ နေ့အထိ ကျေနပ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မပြည့်စုံသေးဘူး။ ဆက်လုပ်ဦးမယ်။ အဘတို့ရဲ့ ရပ်တည် ချက်ကို ပြည်သူတွေ သိစေချင်တာ ပဲ။
ဦးခင်မောင်ဆွေ(နိုင်ငံရေး ဦးဆောင် ခေါင်းဆောင်)
ပြည်သူတွေရဲ့ တုံ့ပြန်မှုက အင်မတန် ကျေနပ်စရာကောင်းပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့နယ်တွေက စည်းရုံးရေးတွေကနေ တစ်ဆင့် ပြန် ကြားတာလည်း အားရစရာကောင်း ပါတယ်။ ဂန့်ဂေါ၊ တောင်တွင်း ကြီး၊ မန္တလေး၊ မိုးကုတ်၊ ရန်ကုန် ပြန်ကြားရတာတွေက အင်မတန် ကောင်းပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က မြောက်ဥက္ကလာကို စည်းရုံးရေး ဆင်းတာ။ ဒီပါတီကိုပဲ မဲထည့် မယ်ဆိုပြီး ပြောကြတယ်။ နောက် အခု ရက်ပိုင်းမှာပဲ ရန်ကုန်မှာ စည်း ရုံးရေးဆင်းတော့ လူငယ်တွေက ခမောက်တွေဆောင်းပြီး သွားကြ တာ။ မဲထည့်ဖို့ပါတီရှိပြီဆိုပြီး ပြော နေကြတာ အားရမှုရှိပါတယ်။
တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း)
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ပြည်သူလူ ထုကို အခုမှ ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေက တည်းက ပညာရေး၊ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးတွေကြားမှာ တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ ဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိ အချိန်ထိလည်း ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ထိတွေ့နေပါတယ်။ မသိသေးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကိုလည်း မိတ်ဆက်၊ သိတဲ့သူတွေကိုလည်း အကျိုး သင့်အ ကြောင်းသင့်တွေ့ဆုံဟော ပြောနေရတဲ့သဘောပါ။ စည်းရုံးရေး ကာလ တိုးပေးလို့လည်း အပြောင်း အလဲ တစ်ခုဖြစ်မသွားပါဘူး။ ဖြည်းဖြည်း လုပ် ရမှာနဲ့၊ မြန်မြန် လုပ်ရတာပဲရှိပါတယ်။ လူထုက လည်း စိတ်ဝင်စားတဲ့လူ ရှိသလို ဘာသိဘာသာနေတာတွေ လည်း ရှိပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်ထိ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ စည်းရုံးရေးမှာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့ ကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။ ရာနှုန်းအားဖြင့် တော့ ပြောလို့မတတ်သာပါဘူး။